Midowga Musharixiinta oo sheegay in Maanta Farmaajo uu ka fashilmay qorsho muddo kordhin ah - Awdinle Online
Midowga Musharixiinta oo sheegay in Maanta Farmaajo uu ka fashilmay qorsho muddo kordhin ah
Xubnaha Midowga Musharixiinta ayaa waxaa ay ka hadleen xaalada siyaasadeed ee dalka, dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka, sida kulankii Golaha Shacabka ee Maanta baaqday iyo kulamada looga hadlayo Arrimaha doorashooyinka dalka.
Afhayeenka Midowga Musharixiina Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in Kulankii Maanta ee Golaha Shaacabka ee baaqday uu ahaa abaabul ka yimid Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Musharax Daahir Geelle oo Warbaahinta kula hadlay Muqdisho waxaa uu sheegay in kulankii baaqday ee Maanta ee Golaha Shacabka sidoo kale la doonayay in sharciga dalka lagu jebiyo dadkana la iska horkeeno iyo muddo kordhin, taasina ay kasoo horjeedaana, isla markaana cambaareeynayaan.
Sidoo kale Daahir Maxamuud Geelle waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in Midowga Musharixiinta ay doonayaan deganaansho iyo heshiis, balse Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si kale oo dhibaato iyo iska horkeen ah uu dalka ku wado.
Midowga Musharixiinta madaxweynaha ayaa dhowr jeer waxaa ay uga digeen Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu sameeyo qorsho muddo kordhin ah.
Previous articleMaamulka Gobolka Banaadir oo shir deg deg ah ka yeeshay dhaca Mobeelada
Next articleDad horleh oo Cudurka Coronavirus ugu geeriyooday Muqdisho